Stakeholder Survey Summary-Somali
Cabirida horumarka hawlgalkeenna: 2018 Natiijooyinka sahanka daneeyayaasha
Degmada dugsigeenu waxay leedahay ujeeddo cad oo loogu talagalay ardayda oo idil: "Inay dhiirrigeliso oo ay u diyaariso ardayda oo dhan kalsooni, dhiirranaan iyo karti ay ku gaari karaan riyooyinkooda; wax ku biiriyaan bulshada; oo ku hawlan noloshii barashada. "Si loo qiyaaso horumarka aan ka gaarno ka caawinta ardayda inay gaaraan hadafkaas, shaqaalaha Dugsiyada Osseo waxay ururiyaan macluumaad siyaabo kala duwan.
Mid ka mid ah dadaalka ugu muhiimsan cabiraad weyn waa Sahanka Dareemaha ee iyada oo ardaydu, shaqaalaha iyo waalidiinta / masuulka ay bixiyaan jawaab celin ku saabsan dhowr qaybood oo muhiim ah oo la xidhiidha howlgalka. Natiijooyinka ka soo baxa sahaminta 2018 waxay caddayn u yihiin kobcinta si ay u dabaaldegaan iyo sidoo kale meelaha qaarkood oo aan horumarin karno.
In ka badan 12,000 oo ardayda dhigata fasalada 3-aad 12-aad waxay sahamiyeen sahanka sanad dugsiyeedka 2017-18.
· Ka-qaybgalayaasha waalidka / masuulka waxaa lagu soo xulay shaandho-marin si loo hubiyo in jawaab-celiyeyaashu ay wakiil ka ahaayeen waalidka / masuulka bulshada ee Dugsiyada Aagga Osseo (in ka badan 1,000 waalidiinta/ masuulka ka qaybgalayaasha sannadka 2018). Cilmi-baaris ayaa lagu maamuley Ingiriisi, Hmong, Spanish, Vietnamese iyo Soomaali.
Dhammaan shaqaalaha ayaa lagu martiqaaday in ay sahanka sameeyaan sannadka 2018; 1,106 ayaa ka qayb qaatay.
Waxa aan ka baranay
Daraasadda daneeyayaasha waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo maamulayaasha inay cabbiraan sida aan u sameyneyno si aan u caawino ardayda inay la kulmaan sadexda ujeedo ee istaraatiijiyadeed ee laga heley hawlgalka degmada: helitaanka riyooyin, wax ku biirin jaaliyada, iyo ku hawlan waxbarashada barashada. Waxaan ka helnay isbeddellada soo socda ee laga bilaabo Bisha Sagaalaad 2014 ilaa sahaminta guga 2018:
Arday badan ayaa soo wariyay "qof ka shaqeeya dugsigeyga ayaa iga caawiyay inaan dajiyo goolal si aan u helo meel u dhow si aan u gaaro riyooyinkayga." Tani waxay kordhay 51% sannadka 2014 ilaa 60% sannadka 2018.
Waalidiinta ayaa sidoo kale waxay u badan tahay inay sheegaan in qof dugsi ka caawiyay wiilkooda ama gabadooda inay bartilmaameed u yihiin. Tani waxay kordhay 47% ilaa 52%.
Sannadkan, macalimiintu waxay u badan tahay inay ku heshiiyaan bayaankan: "Waxaan awoodaa inaan ka caawiyo ardayda inay aqoonsadaan oo ay ka shaqeeyaan riyooyinkooda." Tani waxay kor u kacday 82% ilaa 85% ".
Mid ka mid ah caqabadaha ka jira aaggan ayaa ah in fikradaha ardayda ee aragtida ama riyada mustaqbalka aaney kor u qaadin ardayda (74% joogitaanka) iyo waxoogaa hoos u dhacay waalidka (laga bilaabo 75% ilaa 73%). Macallimiintu wax ayay u badan tahay in ay tilmaamayaan in "ardayda badankood ee aan helay in ay ogaadaan sanadkan waxay iila hadleen riyooyinkooda mustaqbalka (laga bilaabo 63% 2014 ilaa 68% sannadka 2018.
Ka qayb qaadashada Bulshada
Arday badan ayaa sheegaya in dugsigooda, ardayda loola dhaqmo si ixtiraam leh. Tani waxay kordhay 50% ilaa 64%.
Labada sanoba,(2014 ilaa 2018) ku saabsan afar ka mid ah shan ka mid ah waalidiinta waxay muujiyeen in wiilkooda ama gabadhoodu si ixtiraam leh ula dhaqmaan dugsiga.
Sidoo kale labadii sanno, in ka badan afar ka mid ah shan macallin ayaa tilmaamaya in ardayda loola dhaqmo si ixtiraam leh dugsiga. "
Hal meel oo loogu talagalay kobcinta waxtarka bulshada ayaa ku salaysan fikrado ah in ardaydu 'ay ka caawiyeen in ay daboolaan baahida dadka kale iyada oo loo marayo hogaaminta, adeegga, ama habab kale' 'inkastoo ardaydu muujinayaan koror aagga (58% ilaa 68%), tan waa su'aasha ah heshiiska hooseeya ee ugu hooseeya, waxaana jiray hoos u dhac ku yimid waalidiinta (69% ilaa 67%) iyo macalimiin (46% ilaa 40%).
Ka shaqeynta Xirfadaha Barashada Nolosha dheer
Arday badan ayaa leh "Mar haddii aan go'aansaday inaan sameeyo wax adag in la sameeyo, mar walbana waan raacaa oo sameeya." Boqolkiiba wuxuu kordhay 60% 2014 ilaa 73% ee sannadka 2018.
Labada sanno labadoodaba, laba-meelood laba ama in ka badan oo ka mid ah waalidiintu waxay yiraahdeen "Marka uu / iyadu go'aan ku gaadhey inuu sameynayo wax adag oo la sameeyo, isaga / iyadu had iyo jeer way raacaan oo sameeyaan.
Taas bedelkeeda, 30% macallimiinta ayaa isku raacay bayaanka: "Ardayda intooda badan waxaan helay inay ogaadaan inay muujinayaan wax badan oo joogtayn ah oo la raaco."
Wixii waxbarashada dheeraadka ah, maareynta waqtiga ayaa ah goob loogu talagalay koritaanka. Inkasta oo ay ardaydu dareemeen koror ah aaggan (laga bilaabo 63% ilaa 69%), waxaa jiray heshiis hoose iyo hoos udhaca waalidiinta (laga bilaabo 64% ilaa 65%) iyo macallimiin (laga bilaabo 39% ilaa 32%).
Qayb kale oo ka mid ah sahaminta ayaa qiyaastay sida aan u sameyneyno si aan u caawino ardayda iyo qoysaska inay dareemaan soo dhaweyn dugsiga iyo ixtiraam iyo kalsooni ay qabaan shaqaalaha dugsiga.
Arday badan ayaa leh waxay dareensanyihiin inay ka tirsan yihiin dugsiga, taasoo kor u kacday 62% ilaa 71%.
Waalidiin badan ayaa sheegaya in iskuulka guud ahaan uu soo dhaweynayo qoyskooda, ayagoo kordhaya 83% ilaa 84%.
· Inkasta oo ay jireen wakhti sii kordhaya, sannadka 2018, kaliya 3 ilaa 5 arday : "Waan ku faraxsanahay inaan la wadaago fikradahayga iyo fikradahayga dugsiga" iyo "Ardayda waxaa laguula dhaqmayaa si caddaalad ah dugsiga."
Waalidiinta, waxaa jira meel lagu kobciyo su'aasha: "Waxaan dareensanahay in shaqaalaheyga xanaanada / wiilkeeyga ay i daryeelayaan" Tani waxay xoogaa kor u kacday 70% ilaa 67%.
Arday badan ayaa sheegaya in dadka waaweyni ay ula dhaqmaan si xushmad leh, iyagoo sii kordhaya min 74% ilaa 81%.
Labada sanno, dhammaan waalidiinta (92% ilaa 95%) waxay soo sheegeen in dugsiga ama wiilkeeda ama gabadhiisa ay ula dhaqmaan si ixtiraam leh.
Fikradaha ardayda "Dadka waaweyn ee dugsiga ayaa wax uga qabtaan walaaceyda marka ay suurtogal tahay." Waxay kordhiyeen afar boqolkiiba, laakiin waxay weli yihiin 69% oo keliya.
Waxaa jiray fikrad hoose iyo hoos u dhac yar (laga soo bilaabo 80% ilaa 76%) ee aragtida waalidka "shaqaalaha dugsiga waxay raacaan ballanqaadyadooda."
Arday badan ayaa sheegaya in dadka waaweyn ee iskuulku ku kalsoon yihiin, in ka badan 72% ilaa 79%.
Labada sano ee la soo dhaafay, sagaal ka mid ah 10kii waalidba waxay muujiyeen in shaqaalaha dugsiga ay ku kalsoon yihiin.
* Natiijooyinka degmada, natiijada qaladka waa +/- 2% 95% kalsoonida kalsoonida.
Hogaamiyayaasha dugsiga iyo degmooyinka ayaa sii wadi doona inay isticmaalaan natiijooyinkan iyo xogta kale ee qorshaynta hagaajinta. Sahankan ayaa sii wadi doona in loo maamulo ardayda iyo shaqaalaha sanad kasta, iyo waalidiinta / masuuliyiinta sannad kasta.